Muxuu kusoo dhamaaday Shirkii Afisyooni? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu kusoo dhamaaday Shirkii Afisyooni?
Waxuu ku billowday jawi niyad-jab ah, oo aan teendhada ku sugnayd dhinacyadii lagu casuumay oo dhan, iyadoo qol yar isku soo xireen Farmaajo iyo guul-wadiyaashiisa kadibna ku kala tagay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shir aan loo dhameyn ayuu saakay Farmaajo ka furay Teendhada Afisyooni oo ku yaalla nawaaxiga Garoonka diyaaradaha Muqdisho, halkaasoo isaga lagu doortay afar sano kahor.
Farmaajo oo aad loo ilaalinayo ayaa shirka furay, waxaana goob-joog ahaa oo kasoo qeybgalay Madaxda Maamullada isaga taageersan ee HirShabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, RW Rooble iyo duqa Muqdisho Cumar Filish.
Waxaa qaadacay Shirka madaxdii kale ee lagu casuumay sida Axmed Madoobe iyo Deni oo sheegay inaysan ka qeybgalaynin shir uu wato Farmaajo, islamarkaana aan looga hadlaynin wax ka duwan qodobadii horey la isagu khilaafay.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Xil-gaarsiinta Cusmaan Dubbe oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in shirka qeybtiisii koowaad lasoo gaba-gabeeyay, islamarkaana uu rajeynayo in dhinacayda ka maqan ay kasoo qeybgalaan kulanka berri.
Sababaha keenay fashilka Shirka waxaa kamid ah in Farmaajo uu diiday baaqa Deni iyo Axmed Madoobe ee ah inuusan uga soo qeybgalin isagoo sheeganaya Madaxweyne, maadaama mudo-xileedkiisu dhamaaday iyo inuu kulanka noqday mid beesha Caalamka dhexdhexaadinayso, islamarkaana ay damaanad qaadayso fulinta wixii lagu heshiiyo.
Safaaradda Mareykanka iyo UNSOM ayaa isku dayaya inay ku qanciyaan dhinacyada maqan inay kusoo biirayaan shirka, iyagoo maanta wadahadallo la qaatay Deni iyo Axmed Madoobe, iyadoo sidoo kale lala hadlay Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Cabdi Xaashi oo ku midoobey maalmo kahor Madasha Badbaado Qaran.